चोटका कारण नेइमार फेरि टीम बाहिर – Khabar Silo
चोटका कारण नेइमार फेरि टीम बाहिर
काठमाडौं, २१ माघ । शनिबार राति भएको मोन्टपिलिएरसँगको खेलको क्रममा चोट लागेपछि नेइमार पूनः खेल खेल्न नसक्ने भएका छन् । चोटका कारण उनी मंगलबार नान्टेससँग हुने प्रतिस्पर्धामा पिएसजीमा रहेर खेल्न नपाउने भएका हुन् ।
पिएसजीले सोमबार निकालेको सूचनाअनुसार नेइमारको करङमा चोट लागेको र आराम गर्न पर्ने चिकित्सकको सुझावअनुसार मंगलबार नान्टेससँग प्रतिस्पर्धाका लागि टीममा रहने छैनन्।
शनिवार रातिको मोन्टपिलिएरसँगको खेलको क्रममा नेइमारलाई चोट लागेको बताइएपनि गम्भीर चोट नरहेको उनका कोच थोमस टुसेललाई उदृत गर्दै टाइम ट्वान्टी फोर न्यूजले बताएको छ ।
आइतवारदेखि सोमवारसम्म पेरिसमा आफ्नो २८औँ जन्म दिन भब्य रुपमा मनाउन व्यस्त नेइमारलाई कोच थोमसले नेइमारले जे गरे त्यो ठिक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले भने-‘नेइमार जस्तो खेलाडि खेल शुरु हुन भन्दा केहि समयअघिसम्म प्रशिक्षक पुगेको स्थानमा तालिम लिन नपुगी बर्थडे मनाउनमै व्यस्त हुन्छन् भने त्यो भन्दा गलत अरु के हुन्छ ?’
पार्टी लगत्तै घोषणा भएको खेल टीममा नेइमार नपरेपछि नेइमारलाई पार्टीमै व्यस्त भइ प्रशिक्षण नलिएको कारण टीमबाट बाहिर गरिएको हो कि भन्ने समेत शंका उब्जिएको छ ।
मेस्सीलाई रामोसको प्रश्न- यो कसैले सोचेको थियो र, लियाे ?
एजेन्सी । लियोनेल मेस्सी र सर्जियो सामोसले एकअर्काविरुद्ध लामो समयसम्म खेले । अघिल्लो वर्ष एल क्लासिको हुँदा मेस्सी बार्सिलोनाको र रामोस रियल मड्रिडका कप्तान थिए ।उनीहरु डेढ दशक भन्दा बढी एकअर्काविरुद्ध खेले । त्यसबीचमा उनीहरुले कयौं पटक एक-अर्काको सामना गरे । तर, अहिले अवस्था फरक भएको छ । दुवैजना अहिले फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन […]
साफ यू१८ च्याम्पियनसिप आजदेखि काठमाण्डाैमा सुरु हुँदैछ । जसमा नेपालले पहिलो खेलमा माल्दिभ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको मैदानमा हुने खेल दिउँसो तीन बजेबाट सुरु हुनेछ ।नेपाली टिमको कप्तानी जय गुरुङले गर्दैछन् । यता, माल्दिभ्सले पनि नेपाली टिमविरुद्ध अंक खोस्ने लक्ष्य रहेको बताएकाे छ। नेपाली टिमका प्रशिक्षक श्रेष्ठले यसपटकले टिम निकै ब्यालेन्स रहेको […]
पारसको राजीनामापछि सन्दीपले दिए मन छुने अभिव्यक्ति
काठमाडौं। नेपाली क्रिकेट टिमका लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेले पारस खड्कालाई सुखद् भविष्यको शुभकामना दिएका छन् । कप्तान खड्काले पदबाट राजीनामा दिएपछि सन्दीपले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नेपाली क्रिकेटमा पारसको योगदान ठूलो रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘तपाईँको नेतृत्वमा नेपाली क्रिकेटले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । जुन पहिला कहिल्यै हासिल गरेको थिएन, मलाई र […]
दराजकाे ठगी पुष्टि भएपछि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना !
सक्किगोनी छोडेर रातारात जिग्री रंगशालामा,”धुर्मुस दाईले गरेको काम देखेर भाबुक भए जिग्री (भिडियो)